Ciidamada Israel oo Toogasho Ku Diley 4 Falastiiniyiin ah Marinka Qaza -Sawirro
Saturday December 16, 2017 - 10:43:40 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Banaanbaxyo waaweyn ayaa Jimcihii labaad ka dhacay magaalooyin badan oo caalamka ah iyadoo banaanbaxyadaana looga soo horjeedo aqoonsiga uu Madaxweynaha Maraykanka u aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada Israel.
Ciidamada Israel ayaa illaa afar ruux oo ka mid ahaa kumanaan banaanbaxyo ka dhigayay ku diley marinka Qaza halka mid kalana uu ku dhaawacmay Ramallah.
Dadka toogashada lagu diley maanta ayaa waxa ka mid ahaa Ibrahim Abu Thurayeh oo ahaa nin curyaan oo 29 jir ahaa.
Tirada Falastiiniyiinta ee ku dhaawacmay banaanbaxyada socday mudada toddobaadka iyo dhowrka maalmood ah ayaa waxa ay gaarayaan 150 kuwaasoo dhammaantood ah dhalinyaro.
Dhalinyarada toogashada lagu diley ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa wiil soo xirtey waxyaalo macmal ah oo u soo ekeysiiyay suunka la isku qarxiyo hase yeeshee lagu arkayay sawirada wiilkaa oo ay waxyaalaha ku xirnaayeen isagoo meyd ah.
Carada ka dhalatay go’aanka uu Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ugu aqoonsaday magaalada Qudus caasimada Israel ayaa toddobaad kadib sii kordhaysa iyadoo taageero badan loo muujinayo shacabka Falastiin.
Kadib salaadii Jimce ee ayaa boqolaal ruux oo ka mid ah Muslimiinta ku tukatay masjidka barakaysan ee al-Aqsa waxaa laga horistaagay in ay u gudbaan qeybta gabowday ee magaalada Qudus iyadoo ciidamo badan oo Yuhuud ah la soo dhoobay halkaas.
Banaanbaxyada ayaa waxaa sidoo kale ay ka dhaceen magaalada Mumbai ee dalka Hindiya,caasimada Malaysia ee Kuala Lumpur iyo magaalo madaxda dalka Japan ee Tokyo.